4 Talooyin ku Saabsan Twitter - Top40 Geospatial September 2015 - Geofumadas
4 Talooyin guusha on Twitter - Top40 2015 September Geospatial
Sebtember, 2015 Geospatial - GIS, Internet iyo Blogs
Twitter wuxuu u yimid inuu joogo, gaar ahaan koritaanka ku tiirsanaanta internetka ee isticmaalayaasha isticmaalkooda maalin kasta. Waxaa lagu qiyaasayaa in 2020 80% isticmaalayaasha internetka ay ku xiran doonaan qalabka moobiilka.
Waxba ma laha berrigaaga, haddii aad tahay cilmi-baare, la-taliye, bandhig, ganacsade ama madax-bannaan, maalin walbaa aad ka qoomameyn kartid inaadan ku bilaabin Twitter si habsami leh. Ha la yaabin in wareysiga shaqadaada xigta uu kuu sheegayaa:
Shirkadan waxaan tixgelineynaa qiimaha saameynta wada shaqeeyayaasha. Miyaad fadlan kartaa ii sheeg inta taageerayaashu ay leeyihiin xisaabtaada Twitter?
Talooyinkaasi waxay noqon karaan kuwo wax ku ool ah, haddii aad horey u isticmaashay ama u adkeyn jirtey.
1. Ha iloobin Twitter.
Dhamaan shirkadaha waxay isticmaalaan Twitter -way fahmaan ama maaha habka- iyo inkasta oo ay maalin uun isbedelayso wax kale, ugu yaraan marka ay tahay qaabka saamaynta, ha iska dhego tirin.
Had iyo jeer waa muhiim in la isticmaalo habka saameynta cabiraadda. Twitter wuxuu leeyahay nidaam u gaar ah oo qiyaasaya Retweets iyo Fariimaha, laakiin taasi waxay aadaa abbaar, sidaas daraadeed hab wax ku ool ah ayaa ah in la isticmaalo gaaban taas oo kuu ogolaaneysa inaad cabirto saameynta iyo barashada kuwaas oo ah arrimaha aad ka dhalinayso gaadiidka, sida Karmacracy.
Si haboon, waa inaad isticmaashaa codsi si aad u aragto Twitter. My favorites ayaa ah Flipboard ka mobile iyo Twitdeck ka desktop. Marka hore waxaad raaci kartaa waxyaabo badan marka laga reebo Twitter, tan labaadna waxaad raaci kartaa mowduucyo gaar ah.
2. Isticmaal xeeladaha si aad u aragto.
Twitter wuxuu aad uga duwan yahay shabakadaha kale ee bulshada. Linkedin waa inay sameeyaan shabakad qiimo leh oo xirfadlayaal ah, Facebook si ay ula socdaan xidhiidhka dadka - hadda waxay u guurayaan Watsapp-. Twitter waa in la ogaado waxa dhacaya, sidaa darteed, waa inaad ogaataa in fariin uu leeyahay ugu badnaan 10 daqiiqado nololeed ee loogu talagalay isticmaalayaasha raacaya xisaabaha isla mowduucaas. Sidaas darteed, halkii ay sugi lahaayeen inay ku raacaan, waa inaad ka fileysaa in kuwa ugu yaraan ay kuu akhriyaan. Tani, waxaa lagu talinayaa:
Isticmaalka sawirada daabacadaha ayaa sababaya saameyn weyn. Ha ku xadgudbin sawirrada muuqaalka leh.
Haddii aad kaliya u baahantahay inaad daabacdo dhowr jeer maalintii, isticmaal jadwallada muhiimka ah. Inta u dhaxaysa 7 AM iyo 3 PM Waqtiga Mareykanka, Inta u dhaxaysa 1 PM iyo 9 PM oo ka yimid Western Europe.
Ha tartan, laakiin ka mid noqo nidaamka deegaanka. Labada xisaabood ee waaweyn waxay ubaahan yihiin kuwa yaryar iyo kuwa yaryarba waxay leeyihiin wax ka bartaan kuwa waaweyn.
Retweet waa calaamad muujinaysa in lagu faraxsan yahay, sameynta jecel yahay xuriyad, ka jawaabista Tuit waxay ku ansax tahay oo kaliya dhacdooyinka iyo dirista farriimo toos ah shaqeyn aan faa'iido lahayn ee Twitter.
Waligaa ha ku dhajin fariin otomaatik ah kuwa adiga ku raacsan, taas waa wakhti wakhti iyo naqshad la'aan.
Isku day inaad ku jirto liisaska, sababtoo ah dadku ma raacaan koontooyinka shakhsiyadeed, laakiin waxay raacaan liistadooda iyaga oo abuuray ama kuwo kale oo qiimo leh.
Ha ka tegin xisaabtaada adigoon sawir lahayn, taas oo keenaysa aragti ah diiqad.
Ha daabicin kaliya waxyaabahaaga gaarka ah. Qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha kale ee dadka kale ayaa loo riyaaqi karaa, laakiin sidoo kale waxay daabacaan mar kale, iyagoo sawir ka wanaagsan, madaxweyne fiican iyo haddii ay suurtagal tahay, amaahda qofkii hore u sheegay. Wargeyska Tweeting wuxuu leeyahay 80% macmacaan.
Ha adeegsanin jilayaasha 100 in ka badan waxaad yeelan doontaa 17% saameynta ugu weyn.
Isticmaal hashtag oo kaliya oo la xiriira mawduucaaga, kordhi gaadhiga 100%. Ha isticmaalin wax ka badan laba hashtag haddii aadan rabin inaad lumiso 17% saameynta.
3. Ha isticmaalin xeelad si ay kuu necbaadaan.
Haddii aadan u baahnin inaad wax soo saartid, ma fiicna inaad sameyso. Sidaa oo kale adiga oo aan kaa lumin waxay kaa dhigi kartaa inaad lumiso kuwa raacsan.
Haddii aad ubaahan tahay inaad tweet, laakiin aad leedahay waqti ka yar ama waxaad noqon doontaa socdaal, ka dibna dooran mawduucyo qiimo leh oo aad halkaas ku aragtay, iyo jadwal ugu yaraan laba maalin. Waxaad isticmaali kartaa TweetDeck, had iyo jeer isticmaalaya muuqaal iyo jadwalka 9 AM iyo 1 PM, waqtiga Maraykanka.
Ha isticmaalin taatikada qallafsan si aad u hesho asxaabta. Kuwa lagu guuleystey saldhig lacag ah waxay kaa dhigi doonaan saameyn saameyn ah, kuwa lagu guuleystey isticmaalka khiyaano aan haboonayn waxay horseedi karaan ganaaxyo. Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo dadka raacsan waa iyada oo la soo koobi karo tayada tayada iyo ka dib xisaabaadka xiisaha.
4. Aqoonso meesha aad ku barbardhigi karto dadka kale.
Inkastoo tani aysan ahayn tartan, waxaa muhiim ah in la ogaado sida koontadaadu u koreyso. Kobaca 11% lix bilood waa calaamad caafimaad ee koontooyinka hoos ku xusan 10,000. Kobaca ka sarreeya 20% lix bilood waa calaamad muujineysa in uu qabanayo shaqo aad u fiican oo lagu raadinayo dadka raacsan iyo daabacaadda alaabta tayada leh.
Xayeysiinta soo socota waxay u dhigantaa liiska "Geospatial Top40", oo la cusbooneysiiyey Sebtembar 2015. Waxaanu raacnay baadhitaanadii hore ee daabacaadyadii hore; Liistada, waxaan kala soocnay xisaabaadka 21 ee asal ahaan Ingiriisi, laga bilaabo 25 ee asal ahaan ka soo jeeda Maraykanka. Waxaanu ku qornay xisaabin aan firfircooneyn, waxaanu ku daray qaar ka mid ah kuwa cusub ee lagu dheellitirayo, gaar ahaan Ingiriisi si ay u noqdaan heer bilow ah oo ku jira taageerayaasha 160,000 dhinac; Waxaan sidoo kale ka tagnay qiyaastii lixaad (guud ahaan hadda waxaa jira 46).
Waxaa ka mid ah xisaabaadka cusub, waxay sare u qaadeen qgis y GvSIG Waxaan go'aansanay inaan galno xaddiga muhiimadda ay u leeyihiin mawduuceena. Waxaan ku dhejinay xaruntii xiga Esri_Spain, oo ah saddexda xisaab ee kaliya ee la xiriira software.
Ka dhex muuqata xisaabaha cusub ee isku-dhafan ee kor ku xusan TailQ1: geoawesomeness, geoworldmedia, maps_me, cholegeographs.
Hoos waxaa kuqornay hoos-u-dhac ku yimid GIS, GIS Juquraafi, geoblogger, muqdisho, joneeshinka iyo geoinquiets.
Maya Koontada Sep-15 Koritaanka Isku uruursanaanta Individual Goobaha Idioma
1 @geospatialnews 26,928 4% 17% 17% Top Inglés
2 @gisuser 20,704 3% 29% 13% Inglés
3 @gisday 13,874 11% 38% 9% Inglés
4 @geoawesomeness 13,405 2% 46% 8% Inglés
5 @Qgis 12,066 54% 7% Kala-guurka Inglés
6 @geoworldmedia 10,848 2% 60% 7% Inglés
7 @directionsmag 9,577 5% 66% 6% Qalabka Q1 Inglés
8 @MAPS_ME 7,397 71% 5% Qalabka Q2 Inglés
9 @egeomate 6,422 130% 75% 4% Qalabka Q2 Inglés
10 @URISA 5,723 3% 78% 4% Inglés
11 @Geoinformatics1 5,578 5% 82% 3% Qalabka Q3 Inglés
12 @GisGeography 5,317 85% 3% Inglés
13 @underdarkGIS 4,166 2% 88% 3% Inglés
14 @pcigeomatics 4,118 4% 90% 3% Inglés
15 @gim_intl 3,738 12% 93% 2% Qalabka Q4 Inglés
16 @Cadalyst_Mag 3,021 2% 95% 2% Inglés
17 @NewOnGISCafe 2,722 8% 96% 2% Inglés
18 @POBMag 2,460 5% 98% 2% Inglés
19 @GeoNe_ws 2,089 99% 1% Inglés
20 @MondeGeospatial 794 100% 0% Inglés
21 @geoblogger 793 100% 0% Inglés
1 @CivilGeeks 22,489 14% 14% Top 1 Español
2 @ingenieriared 18,400 4% 25% 11% Español
3 @geofumadas 17,221 55% 36% 11% Español
4 @blogingenieria 16,650 3% 46% 10% Español
5 @MundoGEO 14,795 2% 55% 9% Kala-guurka Portugués
6 @gersonbeltran 11,437 2% 62% 7% Español
7 @colegeografos 6,958 1% 66% 4% Español
8 @Esri_Shaqee 6,062 3% 70% 4% Qalabka Q1 Español
9 @Gvsig 6,052 74% 4% Español
10 @mappinggis 5,296 10% 77% 3% Qalabka Q2 Español
11 @nosolosig 4,158 10% 80% 3% Español
12 @masquesig 3,518 10% 82% 2% Qalabka Q3 Español
13 @Geoactual 3,228 4% 84% 2% Español
14 @ClickGeo 3,059 4% 86% 2% Portugués
15 @Tel_y_SIG 3,019 3% 88% 2% Español
16 @orbemapa 2,795 6% 89% 2% Español
17 @MappingInteract 2,681 8% 91% 2% Qalabka Q4 Español
18 @comparteSig 2,480 6% 92% 2% Español
19 @geoinquiets 2,408 4% 94% 1% Catalan
20 @gisandchips 2,315 3% 95% 1% Español
21 @COITTopography 2,018 3% 97% 1% Español
22 @ZatocaConnect 1,648 75% 98% 1% Español
23 @SIGdeletras 1,511 3% 99% 1% Español
24 @franzpc 1,345 2% 99% 1% Español
25 @COMMUNITY_SIG 997 9% 100% 1% Español
Markaad naga hadashid saadaashii hore, horeba waa la soo afjaray: URISA waxay ku dhacday TailQ2 waxaana lagu sii daayay egeomate, MundoGEO waxay ku dhacday aagga kala-guurka. Saadaasha kale waa la dhammaystiri karaa dhammaadka Diseembar, kaas oo ahaa lixda bilood ee aynu ku dhaqaaqnay.
Kormeerista waa la soo dhaweynayaa.
Waxyaabo yar ayaa laga beddeli karaa halkan ilaa Janaayo 2016.
Si aad u raacdo liistadaan bogga Twitter:
Wargelinta ilaa Juunyo 2017
Post Previous«Previous size dhabta ah ee dalalka
Post Next Xayiraadda hantida maguurtada iyo isdhexgalka hay'adaha dawladdaNext »